चुनावमा भाग लिएपछि हाम्रो पार्टी र राप्रपाबीच केही भिन्नता हुदैन- धर्मेन्द्र बास्तोला — Sanchar Kendra
Highlights अन्तर्वार्ता विशेष
चुनावमा भाग लिएपछि हाम्रो पार्टी र राप्रपाबीच केही भिन्नता हुदैन- धर्मेन्द्र बास्तोला
काठमाडौँ । यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको चटारो सुरु भएको छ । देशका ठुला भनिएका संसदीय दलहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । त्यसतै अन्य केही साना राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा केन्द्रित भएका छन् ।
यो संसदीय ब्यबस्थालाई बदलेर बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भनेर अलग पार्टी बनाएका मोहन बैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र विश्व भक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले भने चुनाव बहिष्कारको निर्णय गरेका छन् । यता संसदीय व्यवस्थाकै बिरुद्ध रहेको नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले भने चुनावमा भाग पनि नलिने र बहिष्कार पनि नगर्ने मध्यमार्गी निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका प्रबक्ता प्रकाण्डको जोडबलमा विप्लवले निर्वाचनमा भाग लिने कार्यनीतिक प्रस्ताव हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरे पनि केन्द्रीय समितिको बहुमत संख्या बिपक्षमा उभिएपछि उक्त कार्यनीतिक प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित मध्यमार्गी निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि भने नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु लगभग दुई भागमा विभाजित भएका छन् । केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्म एक थरी कार्यकर्ता पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोथरी कार्यकर्ता केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेको चुनावी कार्यनीतिको पक्षमा अन्धभक्त भएर लागिरहेका छन् ।
यसैबीच २ दिन अघि मात्रै पार्टीका प्रबक्ता खडक बहादुर बिक ‘प्रकाण्ड’ आफै निर्वाचन आयोग पुगेरै पार्टी वा मोर्चा दर्ता गर्न दिने समय माग गरेका छन् । पार्टीका अन्य दुई सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ पार्टीको निर्णयका पक्षमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि बहानामा पार्टीलाई संसदीय भासमा फस्न नदिने बताउदै आएका छन् । यसै शिलशिलामा कञ्चनले पार्टी चुनावमा गएको खण्डमा आफ्नो पार्टी र राप्रपामा कुनै भिन्नता नहुने जिकिर गरेका छन् । कञ्चनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाईको पार्टीमा के त्यस्तो समस्या आइलाग्यो र एक पक्ष चुनावमा भाग लिने र अर्को पक्ष चुनावको बिरुद्धमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ?
तपाईले भएको जस्तो त पार्टीमा छैन, भर्खरै सम्पन्न पार्टीको १२औं केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसमा महासचिव विप्लवले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव सिङ्गो केन्द्रीय समितिको एक मतले पारित भएको छ । त्यो प्रस्तावमा पार्टीले चुनावमा भाग नलिने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, तर अहिलेको देशको विशिष्ट खालको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरिकन एमसीसीको बिरोध गर्ने, राष्ट्रघातको बिरोध गर्ने, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, अहिलेको यो व्यवस्थाको विकृतिका बिरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने खालका उम्मेदवारहरुलाई समर्थन गर्न सकिने तर त्यो भनेको क्याम्पियन गरेर, उम्मेदवार बनाएर सहयोग गर्ने भन्ने चाँही होइन ।
त्यसको बीचमा हामीले भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने, त्यसमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौं, बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका निम्ति जनमत संग्रहमा जाउ भन्ने कुरा अपिल गर्ने, र चुनावमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने देशभक्त जनवादी खालका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोला भनेर जनतालाई भन्ने निर्णय गरेका छौ ।
पार्टीको आधिकारिक निर्णय जुन तपाईले सुनाउनु भयो, त्यसको बिरुद्धमा कसैलाई जाने छुट छ कि छैन ? तपाईको पार्टीको प्रबक्ता निर्वाचन आयोगमा जानु भयो र निर्वाचनमा जानका लागि पार्टी दर्ता गर्न र चुनाव सारेर भएपनि भाग मिल्ने बाताबरण बन्छ कि बन्दैन ? भनेर बुझ्न आएको भन्नुभयो ! भनेपछि अब के हुन्छ यो पार्टी निर्णय उलंघन हो कि हैन ?
पार्टीको निर्णयका बिरुद्ध जान कसैलाई छुट छैन, त्यो बिषयमा यो अन्तर्वाता गर्दासम्म पार्टीका कुनै सचिवालय सदस्यसँग कुरा हुन पाएको छैन, के भएको हो भन्ने बुझेपछि मात्र यसबारेमा बताउन सकिन्छ । मिडियामा आएको पनि मैले सुने, बीबीसीमा उहाँको अन्तर्वार्ता पनि मैले सुने, किन जानु भएको हो, के भएको हो, पार्टीको प्रबक्ता जस्तो मान्छे उहाँले किन चुनावमा जाने भन्नु भएको हो भन्ने बारेमा उहाँसँग कुरा गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
प्रवक्ताले त पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टीको सल्लाहा अनुसार नै म गएको हुँ भन्नु भएको छ नि ? उहाँ त्यति मात्र हैन ऋषि कट्टेललाई समेत भेटेर बिचार मिल्नेहरुसँग मोर्चा निर्माण गरेर चुनावमा भाग लिने भन्नु भएको छ ? तपाईजस्तो सचिवालय सदस्य अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख मान्छे कसरी यो कुराबाट बेखबर हुनु भयो ?
त्यो कुरा मलाई जानकारी छैन, त्यसका बारेमा मेरो कसैसँग सँगछलफल भएको छैन । त्यो चाहिँ उहाँसँग भेटेर उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि के भएको हो भन्ने कुरा उहाँले बताएपछि मात्र जानकारी हुन्छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय एकातिर छ, नीति एउटा प्रकारले बनेको छ, त्यो नीतिका बिरुद्ध जाने गरि प्रबक्ताले त्यसरी कुरा गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई बिश्वाश लाग्ने कुरा हैन, उहाँ के प्रसङ्गमा जानु भएको हो र के कारण बाहिर त्यस्तो बोल्नु भएको हो भन्ने कुरा उहाँलाई भेटेपछि थाहा होला ।
के तपाईहरु साँच्चिकै अफ्ठ्यारोमा, सकसमा पर्नु भएको हो ? यतिबेला तपाईलाई खुलेर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था किन नआएको ? प्रवक्ताले पार्टी निर्णयबिरुद्ध कुरा गरिसकेपछि तपाईले ठोस कुरा त गर्न सक्नु भएन नि ?
त्यो ठोस कुरा त हुन्छ, पहिला त प्रबक्तासँग भेट हुनु पर्यो नि त उहाँले के कारणले यस्तो गर्नु भयो, महासचिवसँग कुरा हुनुपर्यो उहाँसँग सहमति भएको छ कि छैन, उहाँहरुसँग भेटघाट भएपछि मात्र यी कुराहरु खुलस्त भन्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय समिती बैठकभन्दा पहिला तपाईहरु काठमाडौँमा सचिवालयको बैठक बस्दा चुनावमा भाग लिने र नलिने भन्ने बिषयमा ठुलो बहस भएको भन्ने छ, त्यतिबेला तपाई र सुदर्शन चुनावमा भाग नलिने र प्रकाण्ड र विप्लव भाग लिने पक्षमा उभिएको र सन्तोष बुढा न्यूटल बसेको भन्ने छ, त्यसपछि एकाएक सन्तोषलाई लिएर विप्लव कपिलबस्तु जानुभयो बैठकमा विप्लवको प्रस्ताव अलपमतामा पर्यो, तपाईहरुले मध्यमार्गी निर्णय गरेर तत्कालका लागि विप्लवलाई जोगाउनु त भयो तर अहिले जसरी प्रबक्ता प्रस्तुत भएका छन्, त्यसरी उहाँहरु चुनावमा भाग लिनुभयो भने तपाईको पार्टीमा अब के हुन्छ ?
काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठक भयो, बैठकमा चुनाव, महाधिवेशन र एमसीसीका बिषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा थियो, अरु सामान्य एजेण्डाहरु पनि थिए । त्यहाँ बिशेष बहस चाहिँ चुनावकैबारेमा भयो, चुनाव के गर्ने भन्ने महसचिवको प्रस्ताव थियो । त्यसमा भाग लिँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने मत पनि आउने भइहाल्यो, बेठिक हुन्छ भन्ने मत पनि आउने भइहाल्यो, हामी ठोस निर्णयमा नपुगेपछि छलफल केन्द्रीय समितिमा गरौं भन्ने भयो । केन्द्रीय समितिमा जाँदा ४४/४५ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावमा भाग लिनु ठिक हुदैन भनेर बहस गर्नुभयो, हामीले अल्पमत बहुमत बनाएका हैनौ, बहस गरेका हौँ । चुनावमा जाने कि के गर्ने ? भनेर कुरा उठिसकेपछि के गर्दा ठिक होला भन्ने १५/२० जना हुनुहुन्थ्यो, भने चुनावमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कमरेडहरु ५/७ जना हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसो भइसकेपछि हामीले बैज्ञानिक बिधी चाहिँ, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, किन भने पार्टी दर्ता गर्नुको अर्थ भने संबिधान, कानुन, नियम मान्नु र संसदीय व्यवस्था भित्र प्रवेश गर्नु हो । पार्टी दर्ताको कुरा मात्र हैन केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चुनावमा जाने भनेर हात उठाउने बितिकै संसदवादमा प्रवेश गरेको हुन्छ, त्यसकारणले सैदान्तिक हिसाबले गलत हुन्छ भनेर सबै केन्द्रीय समिति सदस्यले बहस गर्नु भयो । त्यसपछि महासचिवले चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, स्वतन्त्र प्रकारका व्यक्ति जसले राष्ट्रघाटको बिरोध गर्छ, जसले यो व्यवस्थाको बिकृतिको बिरोध गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने सश्लेषण गर्नु भयो र हामीले त्यहि निर्णय पास गरेर आएका हौँ ।
तपाईहरुले संसदीय व्यवस्था नमान्ने भनिसकेपछि त्यहि व्यवस्थामा हुन लागेको चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय किन गर्न सक्नु भएन ? के त्यस्तो अफ्ठ्यारो आइलाग्यो र ढुलमुले निर्णय गर्नुभयो ?
संसदीय व्यवस्थालाई भित्र गएर परिवर्तन गर्न सकिदैन अहिले बाहिरबाट खुला तरिकाले लडिरहेका छौं । यो अहिलेको दलाल पूँजीवादी व्यवस्था जहाँ संसद्वादीहरुले समेत यो बाट चल्दैन भनेर डिक्लिएर गरिसक्नु भएको छ, र जनताले यसलाई पुरै खारेज गरेको छ । जसले यो सत्ता चलाएको छ त्यो शक्ति पुरै राजनीतिक संकटमा छ । त्यसकारणले हामीले खुला रुपले बाहिर बसेर यो व्यवस्थालाई खारेज गरौँ भनेर आब्हान गर्ने तर प्रतिरोधात्मक बहिष्कार नगर्ने बैज्ञानिक निर्णय गरेका छौं । हामीले भोट नहालेपछि चुनाव बहिष्कार त हुने भयो तर जनतालाई भोट हाल्न नरोकौं मात्र भनेका हौँ । पार्टीको तर्फबाट बहिष्कार हुने भयो तर जनतालाई फैसला गर्नका लागि उसैलाई अधिकार हुने भयो त्यसप्रकारको निर्णय गरेका हौँ ।
कथम कदाचित पार्टी महासचिव र प्रवक्ता चुनावमा जाने निर्णयमा पुगे भने के हुन्छ ? पार्टी फुटको हल्ला समेत बजारमा आइसकेको छ कसरी रोक्नुहुन्छ ?
हैन त्यस्तो हुदैन ! पार्टी निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ, पार्टी फुट्नु हुदैन, केही मान्छेलाई चुनावमै जान मन लागेको छ र पार्टी नीतिविपरित जान खोजे भने तिनलाई अनुशासनको कुरा होला, कारवाहीका कुरा होलान अर्थात यस्ता केही बिधीका कुरा होलान, फुट चाही हुदैन ।
यदि महसचिवले नै प्रवक्तालाई त्यसरी पठाउनु भएको रैछ भने के कारबाही गर्नुहुन्छ ?
नीतिका हिसाबले महासचिव भनेको पनि त सेन्ट्रल कमिटी भित्रको हो नि त, अहिले त्यति पर चाही नजाँउ, अहिलेसम्मको कुरा हेर्दा महासचिव नै त्यस्तो खालको होलान भन्ने कुरा नगरौं, अहिले नै गाडी दुर्घटना भैसक्यो भन्ने छैन, तर गाडी दुर्घटना हुने कुरा पहिलै थाहा हुने कुरा पनि भएन । गाडीको टायर पन्चरसम्म हुनसक्छ, पन्चर हुँदा दुइवटा कुरा हुन्छ, एउटा रोकिने हुन्छ अर्को दुर्घटना पनि हुने हुन्छ । तर अहिले जुन खालको बहस चलिरहेको छ त्यसले एउटा निकास दिन्छ ।
तपाईहरु अहिले सपाट र क्रान्तिकारी देखिनु भएको छ, तर नेतृत्व स्खलित भएकोजस्तो देखिन्छ, हिजोका प्रचण्ड अहिले कुन हालतमा छन्, विप्लव भोली त्यही हालतमा पुग्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्य के हुन्छ ?
त्यो त कुनै व्यक्तिको कारण देश र जनताको भविष्य दाउमा राख्न सकिदैन, क्रान्ति बिचार दृष्टिकोणले गर्ने कुरा हो, व्यक्तिले गर्ने कुरा हैन, । जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नसक्ने विचार भयो भने जनताले बिश्वास गर्ने दिन आँउछ । विप्लवले नै बिश्वाशघात गर्न थाल्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । नेताले विभिन्न अप्शनका बारेमा सोच्ने कुरा त भयो, त्यसैले उतार चढाबजस्तो देखिने हुन्छ । कहिलेकाँही गल्ति कमजोरी पनि हुनसक्छन् तर बिश्वासघात नै गर्नु होला जस्तो लाग्दैन । जहाँ जुट हुन्छ त्यहाँ फुट पनि हुन्छ, जहाँ फुट हुन्छ त्यहाँ जुट पनि हुन्छ। ‘वान डिभाइडेड इन्टु टु त विज्ञानको नियम नै हो ।
विप्लव र प्रकाण्ड चुनावमा भाग लिनेमा पुगे र तपाईहरुले पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने के यो पार्टी यतिकै बलियो भइराख्छ भन्ने तपाइलाई लाग्छ ?
त्यो त यस्तो हो । यो पार्टी हामीले नै बनाएको हो, त्यहि पार्टीभित्र बिचलन आयो भने फेरी त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने कुरा आउछ, फेरी त्यो मजबुत हुदैँ जान्छ, किनभने जहिलेसम्म क्रान्तिको आवश्यकता हुन्छ, तवसम्म पार्टी बन्दै जान्छ, संघर्षहरु चल्दै जाने हुन्छन्, त्यो क्रान्तिको आवश्यकताले पूर्ति गर्ने कुरा हो । पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी दर्ता नगर्ने चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ, महासचिवको अधिकार भनेको प्रस्ताव पेश गर्ने हो, गर्नुभयो, उहाँको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले छलफल गर्यो, अर्को बैठकसम्मको लागि त्यो नै केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, यो कार्यन्वयनतिर जाँदा पार्टी फुट्दैन ।
तपाईको प्रवक्ताका बारेमा कहिले एमाले प्रवेश गर्न लागे भनेर समाचार आए । कहिले यो पार्टी छोड्न लागे भनेर समाचार आए, हावा नचली पात हल्लिने त हैन रैछ, अहिले उहाँका पछिल्ला गतिबिधि हेर्दा कतै कुनै पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्न खोज्या त हैन भन्ने उहाँप्रति बेग्रल्ति प्रश्न उठान थालेका छन्, लक्षण त त्यस्तै देखिन्छ नि के हो उहाँको कुरा ?
त्यो त सबै कुराहरु प्रमाणित नभईकन त्यसलाई यो हो भनेर अनुमान गर्ने कुरा भएन, लक्षण त सबैले देखेकै कुरा भइहाल्यो । तर अनुमानको भरमा उहाँको यही हो भन्ने कुरा आएन, सञ्चारमध्यमहरुले उहाँ एमालेसँग नजिक हुन लाग्नु भएको भनेर प्रचार गरे हामीले छलफल गर्दा हैन गलत प्रचारवाजी भयो भन्ने उहाँको कुरा थियो ।
विप्लव कतै प्रचण्डसँग चुनावी तालमेलमा जाने र पार्टी एकतासम्म गरेर त्यो पार्टीको महासचिव बन्ने रे भन्ने पनि आएको छ, अर्को कुरा अब चुनावमा भाग लिने भएपछि त प्रचण्ड र तपाईहरुमा के फरक भयो र पार्टी एकता गर्न दिए हुन्न ?
त्यो सुनेको कुरा भयो, सुनेको कुरामा लाग्ने कुरा भएन, उहाँसँग कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ । प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीमा त फरक छ, तर चुनावमा भाग लिइसकेपछि प्रचण्डको मात्र हैन, राप्रपा र हाम्रोवीच पनि फरक हुन्न नि ! अहिले संसदभित्र भाग लिएका राप्रपा, काँग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्र, मधेशवादी, बाबुरामको पार्टीलगायत यी सबै पार्टी एउटै पार्टी हुन् । नीतिगत हिसाबले, राजनीतक हिसाबले, कुनै फरक छैन, उनीहरुको आपसी अन्तरविरोध मात्र फरक छ । सबै संसदवादी पार्टी सबै समाजवाद उन्मुख पार्टी भएपछि फरक केही हुने कुरा भएन । अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी संसदवादी राजनीतिबाट बाहिर छ, हामीले पार्टी दर्ता गर्ने चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेका छैनौ, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टी संसदीय घेराबाट बाहिर छ ।
अहिले बाहिर त के चर्चा हुन् थालिसक्यो भने तपाईहरुका नेताहरु पनि जनप्रतिनिधी हुन खोजे, पैसा कमाउन खोजे, डोजरका मालिक हुन खोजे, यिनीहरु पनि विलासितामा डुब्न खोजे, भन्ने छ सत्य हो नि यो ?
त्यो केही ब्यक्तिहरुमा हुनसक्छ, म त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दिन, त्यो टेन्डेन्सीलाई इन्कार गर्न सकिदैन, किन भने हाम्रो समाज भनेको दलाल पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध भएको समाज हो । यहाँ मान्छेका उत्पादनहरु छैनन्, दलाली गरेर मात्र आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय सम्पति छैन, कृषि उत्पादन प्रणाली पनि दलाल पूँजीवादमा आधारित छ । आफ्नै घरमा गरिने कृषि प्रणाली समेत दलालपूँजीवादको घेरामा छिरेर आउनुपर्छ । यो स्थितिमा मान्छेको आर्थिक बिवसताका कारण तपाईले भनेको जस्तो बिकृतिपूर्ण तरिकाहरु कसैले अपनाउन सक्ने भए तर पार्टीभित्र त्यो निर्णय गरिएको छैन ।
अब के तपाईहरुलाई पनि सांसद मन्त्री बन्ने, चिल्ला गाडी चढ्ने, झण्डा हल्लाउने रहर लाग्या हो ?
त्यो रहर त सबैलाई हुन्छ, तर हाम्रो पार्टीलाई छैन, हामीले त देशको भबिष्यको कुरा गर्या छौं, जनताको भबिष्यको कुरा गर्या छौं, कतिपयलाई त्यस्तो रहर लाग्छ सक्छ त्यो प्रश्न सही छ । अहिले यदि हामी चुनावमा गयौं भने प्रगतिशील संयुक्त सरकारको एजेण्डा पनि खारेज हुन्छ, बैज्ञानिक समाजवाद पनि खारेज भयो, त्यसका निम्ति अगाडि सारिएको जनमत संग्रह पनि खारेज हुन्छ । हाम्रो मुख्य मर्म बैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो । त्यसैले अहिले चुनावमा जाने कुरामा बहस नै नगरौं । हामीले निर्वाचनमा जानै हुदैन त भन्या छैनौ नि, अहिलेको दलाल पूँजीवादी व्यबस्थाको विकल्प जनताका प्रतिनिधिद्वारा साशन गर्ने बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको नीम्ति गरिने चुनावमा त हामीले भाग लिने भनेकै छौं नि ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी फुट्दैन भन्ने थियो दुर्घटना भयो, किरणको नेतृत्वमा बन्यो त्यसबाट भएन विप्लवकोमा बन्यो, फेरी यता विप्लवले पनि यस्तै धोका दिए भने तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ?
प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भन्ने मान्छेले कल्पना गर्दैनथे तर भयो । त्यसको समाधान किरणको नेतृत्वमा पार्टी बन्यो, त्यहाँबाट नभएपछि हामीले बनायौं, यता भएन भने पनि समाधान निस्किन्छ । यता हामी मर्यौ भने के हुन्छ त ? समधान हुन्न त हुन्छ, अरु नेता बन्दैनन् त ? बन्छन् । केन्द्रीय समितीको कुनै पनि सदस्यले पुनर्गठन गर्न सक्छ नि त । देशको आवश्यकताले नेताहरु जन्मिने हुन्छ । नेतृत्वले धोका दिदैंमा क्रान्तिको यात्रा पनि रोकिदैन, पार्टीको बहाव पनि रोकिदैन, समाजको गति पनि रोकिदैन केही हुदैन । अफ्ठ्यारो त पर्छ हिड्दा हिड्दै ठेस लाग्यो भने मान्छे त मरीहाल्दैन नि एकछिन अप्ठ्यारो भए पनि पछि त उठेर हिडीहाल्छ नि ।
तपाईहरुले प्रचण्डबाट फुटेर यत्रो ८/९ बर्ष जनतालाई समाजवादको सपना देखाउनुभयो, कुमार पौडेलहरु मारिए, एक जना शिक्षक मारिए, यदि तपाईको पार्टी चुनावमा भाग लियो भने तिनका परिवारलाई तपाईहरु के जवाफ दिनुहुन्छ ?
त्यस कारण त हाम्रो पार्टी चुनाव भाग लिदैन, नलिने निर्णय गरेको छ । जनतालाई घात गर्दैनन् । कोही मान्छे जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् भने त्यो त व्यक्तिको कुरा भयो, अहिलेसम्मको कुरा के हो भने पार्टीको निर्णय चुनावमा नजाने हो, महासचिव पनि त्यो भित्र बस्नुपर्छ । प्रवक्ताले पनि त्यसलाई उलंघन गर्न मिल्दैन ।
एमसीसी बिरोधी आन्दोलन पनि अहिले हावाको झोकाजस्तो हराएको छ, बरु एमसीसीका पक्षधरहरु गाउँ-गाउँमा पुगेर आफुलाई भोट मागिरहेका छन् । तपाईहरुले अब एमसीसीको बिरोध नगर्ने ?
हाम्रो पार्टीले एमसीसीको बिरोध गरिरहेकै छ, अहिले पनि केन्द्रीय समिति बैठकले एमसीसीको बिरोध गर्ने, यसलाई खारेज गर्नका नीम्ति गाउँ-गाउँबाट यसलाई लखेट्ने भनेको छ, त्यही हुन्छ । एमसीसीले यो देशबाट अन्तिममा भाग्नैपर्छ, जसरी श्रीलंका, मालीबाट भाग्यो । अर्को कुरा एमसीसी संसदवाट पारित भएको छैन, किन कि त्यहाँ कुनै भोटिङ्ग नै भएको छैन, केही पनि भएको छैन, हल्ला मात्र गरेर पारित भयो भनिएको छ । त्यो बेलाको पुराना रेकर्ड खोजेर हेर्नुहोस । नेपालमा एमसीसी पारित गर्न दिइदैन लखेटिन्छ ।
अन्तिममा तपाईहरुको पार्टीमा जटिल समस्या पैदा हुदै गइरहेको छ, यो गम्भीर मोडमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबै कमरेडहरुलाई हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिती बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्नुपर्छ । चुनावमा भाग लिनु हुदैन । पार्टीबाट चुनावमा कोही पनि उम्मेदवार खडा हुनु हुदैन नै भन्न चाहन्छु। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु, जिल्लका सेक्रेटरीहरु, जिल्लाका सदस्यहरु, पार्टीको नाममा स्थापित भएका कोही पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरु चुनावमा जानु हुन्न त्यसले जनतालाई धोका दिन्छ । तर पार्टीको कोही तत्ल्लो सतारको सामान्य सदस्य उठ्छ भने स्वतन्त्र भएर उठ्न सक्छ । चुनावमा देशभक्त जनवादी व्यक्तित्वहरुलाई समर्थन गर्न सकिन्छ ।